Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - GamesMixie
Ku soo dhawow http://www.gamesmixie.com/ (ah “site”).Waxaan fahamsanahay in asturnaanta online waxaa muhiim ah in dadka isticmaala of our Site, gaar ahaan marka la samaynayo war business.This xukuma siyaasadaha asturnaanta marka la eego kuwa isticmaala of Site ah (“Visitors”) oo booqan aan transacting ganacsiga iyo Visitors diiwaan inay ganacsi on Site iyo isticmaalaan adeegyada kala duwan ee ay bixiyaan http://www.gamesmixie.com/ (si wadajir ah, “adeegyada”) (“Macaamiisha idman”).”Information Shaqi Ahaan Loo Garan” waxaa loola jeedaa in war kasta tilmaamayaa ama waxa loo isticmaali karaa si ay u aqoonsadaan, xiriirka, ama ay helaan qofka, Ruuxaan quseeyo oo macluumaad sida, lugu daro, laakiin aan ku xaddidnayn, magaca, cinwaanka, lambarka taleefanka, tirada fax, cinwaanka emailka, profiles dhaqaale, lambarka Amniga Bulshada, iyo macluumaad credit card. Macluumaadka Shaqsiga Lagu Garan kuma jiraan macluumaadka la ururiyay si qarsoodi ah (in uu yahay, aan aqoonsiga ee user shakhsiga ah) ama xogta dadka xiran oo aan individual.What ah loo aqoonsaday macluumaadka Shaqsiga Lagu Garan la ururiyo? Waxaa laga yaabaa inaan macluumaad ka soo ururiyaan profile user aasaasiga ah ka dhan ah Visitors naga. Waxaan soo ururin macluumaadka soo socda dheeraad ah ka macaamiisheena Idman: magacyada, cinwaanada, telefoon lambarada iyo cinwaanada email of Macaamiisha Idman, dabeecadda iyo xajmiga ganacsiga, iyo dabeecadda iyo xajmiga alaabada advertising in Macaamiisha Idman ku talo si aad u iibsato ama ururada sell.What ayaa ururinaya warbixintan, ee? Waxa intaa dheer in our ururinta si toos ah macluumaad, our iibiya adeegga xisbiga saddexaad (sida shirkadaha credit card, clearinghouses iyo bangiyada) oo laga yaabo inuu adeegyada sida credit, caymiska, iyo adeegyada Escrow laga yaabaa in ay ururiyaan macluumaad ka Visitors iyo Macaamiisha Idman our. Annagu ma xukumaan sida ay qoladaas saddexaad isticmaalaan macluumaadka sida, laakiin waxaan samayn weydii in ay soo bandhigto siyaabaha ay u isticmaalaan macluumaadka shakhsiyeed bixiyo iyaga ka Visitors iyo Macaamiisha Idman. Qaar ka mid ah labada dhinac saddexaad waxaa laga yaabaa in dhex- in keliya u dhaqmaan sida links ee silsilada qaybinta, hana ku kaydiso, xajisto, ama isticmaalaan macluumaadka la siiyay them.How Site uusan u isticmaali Information Shaqi Ahaan Loo Garan?Waxaan u isticmaali Information Shaqi Ahaan Loo Garan in Customize Site ka, si ay u sameeyaan qurbaanno adeeg ku haboon, iyo si ay u gutaan codsiyada iibsiga iyo iibinta on Site ah. Waxaa laga yaabaa inaan email Visitors iyo Macaamiisha Idman ku saabsan cilmi-baarista ama gadashada iyo fursadaha iibinta on Site ama macluumaadka la xiriira arrimaha ay ugu yeeranayaan Site ku. Waxa kale oo laga yaabaa inaan isticmaalno Information Shaqi Ahaan Loo Garan inaad la xiriirto Visitors iyo Macaamiisha Idman oo ka jawaabaya su'aal gaar ah, ama inuu bixiyo macluumaadka la codsaday. Iyada oo macluumaadka la wadaago waxaa laga yaabaa in laga yaabaa in?Macluumaadka shaqsiga lagu garan oo ku saabsan Macaamiisha Idman la wadaago waxaa laga yaabaa in la Macaamiisha kale oo Idman raba in ay qiimeeyaan dhaqdhaqaaqyadii ugu iman karta la Macaamiisha kale oo Idman. Waxaa laga yaabaa inaan wadaagno macluumaadka qallafsan oo ku saabsan Visitors noo, oo ay ku jiraan tirakoobka ee Visitors iyo Macaamiisha Idman our, hay'adaha our ee raacsan oo iibiya xisbiga saddexaad. Waxaan sidoo kale bixiyaan fursad ay ku “baxdo” hesho macluumaad ama ay la soo xiriireen noo by ama hay'ad kasta oo simaha naga wakiil ah. Sidee loo kaydiyaa Information Shaqi Ahaan Loo Garan?Information Shaqi Ahaan Loo Garan soo uruuriyeen http://www.gamesmixie.com/ sugan ayeey u keydsan ma heli karaan labada dhinac saddexaad ama shaqaalaha http://www.gamesmixie.com/ marka laga reebo isticmaalka sida kor lagu tilmaamay. Maxaa doorashooyin la heli karo si Visitors ku saabsan ururinta, isticmaalaan iyo qaybinta macluumaadka?Visitors iyo Macaamiisha Idman waxay dooran karaan baxay helaya war Buuro Wadal ka ama ay la soo xiriireen noo ah iyo / ama iibiya noo by oo xiriir la hay'adaha ay ka jawaabaya emails sida lagu faray, ama nagala soo xiriiraya [Address] Ma Kukiyada Isticmaalo on Site ah?Kukiyada waxaa loo isticmaalaa noocyo kala duwan oo sababo. Waxaan u isticmaali Kukiyada si ay u helaan macluumaad ku saabsan Dooratay Visitors iyo adeegyada ay u doortaan. Waxaan sidoo kale u isticmaali Kukiyada ujeedooyin ammaanka si ay u ilaaliyaan macaamiisheena Idman. Tusaale ahaan, haddii Customer ah Idman waxaa isbedelo iyo goobta waa la isticmaalin in ka badan 10 daqiiqo, waxaan si toos ah gasho doonaa Macaamiisha Idman off.How ma http://isticmaalka www.gamesmixie.com/ macluumaad login? http://www.gamesmixie.com/ isticmaala macluumaad login, lugu daro, laakiin aan ku xaddidnayn, cinwaanada IP, ISPs, iyo noocyada browser, si ay u falanqeeyaan isbeddellada, maamulo Site ah, ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa user ah iyo sida loo isticmaalo, oo isu soo ururi-hawlgalayaasha information.What ama bixiyeyaasha adeegga ay helaan macluumaadka shaqsiga lagu garan ka Visitors iyo / ama Macaamiisha Idman on Site ballaadhan dadka? http://www.gamesmixie.com/ ayaa galay oo sii wadi doona inay galaan iskaashi iyo ka mid noqoshadooda kale la dhowr warato ah vendors.Such laga yaabaa in ay helaan qaar Information Shaqi Ahaan Loo Garan baahida ah in la ogaado salaysan ee lagu qiimeeyo Macaamiisha Idman xaq u yeelashada adeega. Siyaasadeena gaarka ah ma daboolayo ay ururinta ama isticmaalka macluumaadka this. Daah Warfaafinta Shaqi Ahaan Loo Garan in ay u hoggaansamaan sharciga. Waxaan muujin doonaa Information Shaqi Ahaan Loo Garan si ay u hoggaansamaan amar maxkamadeed ama subpoena ama codsi ka yimid hay'adda fulinta sharciga ah si ay u sii daayaan macluumaadka. Waxaan sidoo kale muujin doonaa Information Shaqi Ahaan Loo Garan markii si macquul ah lagama maarmaan si ay u ilaaliyaan ammaanka Visitors iyo Macaamiisha Idman our. Sidee Site ku sii Information Shaqi Ahaan Loo Garan aamin?Dhamaan shaqaalaha ayaa yaqaan siyaasadda ammaanka iyo dhaqanka. The Information Shaqi Ahaan Loo Garan of Visitors iyo Macaamiisha Idman waa kaliya ay heli karaan tiro kooban oo shaqaale aqoon leh, kuwaas oo waxaa la siiyaa lambar sir ah si ay u helaan macluumaadka. Waxaan baaritaan hababka ammaanka iyo geedi socodka si joogto ah. macluumaad xasaasi ah, sida tirada credit card ama lambarada amniga bulshada, waxaa ilaalinaya maamuuska encryption, in lagu ilaaliyo macluumaadka soo diray Internetka. Inkasta oo aan qaadaan tallaabooyin ganacsi macquul ah si ay u ilaaliyaan goob amaan ah, isgaarsiinta elektarooniga ah iyo database waxaa waajib ah in qaladaad, faragalin iyo jebin-tago, oo ma damaanad qaadi karno ama ballanqaadayso in dhacdooyinka noocaas ah ma dhici doona oo aan ku qasbanaan Visitors ama Macaamiisha Idman kasta oo dhacdooyinka noocaas ah ma noqon doonto. Sidee Visitors sixi kartaa wax kasta oo qalad ah ee Information Shaqi Ahaan Loo Garan?Visitors iyo Macaamiisha Idman la xidhiidhi kartaa si aad u cusboonaysiiso Information Shaqi Ahaan Loo Garan iyaga ku saabsan ama in la saxo wixii qalad ay noo soo dirayso. Visitor a tirtiri kartaa ama barkinta macluumaadka aqoosi ee shakhsiga by Site ah?Waxaan ku siin Visitors iyo Macaamiisha Idman leh farsamo si ay u tirtirto / barkinta Information Shaqi Ahaan Loo Garan ka database Site ee adigoo la xiriiraya . Si kastaba ha ahaatee, sababta oo ah hayaan iyo diiwaanada deletions, waxaa laga yaabaa in aan macquul aheyn in ay tirtirto galo booqde ee aan sii haystay qaar ka mid ah macluumaadka haraaga ah. Shaqsi ka codsado in ay Shaqi Ahaan Loo Garan Information furi yeelan doontaa macluumaadkan qoral iyo tirtiray, oo aan iibin doonin, kala iibsiga, ama isticmaal Information Shaqi Ahaan Loo Garan la xiriira shaqsiga in si kasta oo uu horay u socdo. Maxaa dhacaya haddii Isbedelada Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah?Waxaan ha doonaa Visitors iyo Macaamiisha Idman ogaato oo ku saabsan isbedelka siyaasadda asturnaanta by dhajinta isbedel sida on Site ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aan la beddelo sharciyada macluumaadka gaarka ah si waafaqsan in laga yaabo keeni bixinta Information Shaqi Ahaan Loo Garan in Visitor ama Idman Customer ah ayaa hore u codsaday in aan la shaacin, waanu kula soo xidhiidhi Visitor sida ama Customer Idman in ay u oggolaadaan Visitor sida ama Customer Idman si looga hortago in siidaynta sida. links:http://www.gamesmixie.com/ jiraan xiriiro ay la goobaha kale ee webka. Fadlan la soco in marka aad riix mid ka mid ah xiriiriye, aad u guurayso web site kale. Waxaan kugu dhiirinaynaa in aad ka akhriyi statements gaarka ah oo ka mid ah goobaha lala sida qodobka siyaasada gaarka ee ay ku kala duwanaan karaan annagaa ka.
Isticmaal wax qalab / files halis ugu adiga kuu gaar ah, http://www.gamesmixie.com/ mas'uul ka ma aha dhibaato kasta sameeyo si aad u computer ama burbur loo sameeyaa si aaladaha kale ee isticmaalka qalabka halkan. Tools halkan ama laga yaabaa in aanay shaqayn, Waxaan aan waa lagu furi karaa, haddii ay ma samayn.